Loro Parque Fundación dia mandray anjara amin'ny fahombiazana amin'ny fahombiazan'ny Parrot mena-sofina any Kolombia
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Loro Parque Fundación dia mandray anjara amin'ny fahombiazana amin'ny fahombiazan'ny Parrot mena-sofina any Kolombia
Na dia mihoatra ny 8,000 kilometatra manasaraka ny Nosy Canary amin'i Kolombia aza dia manana fifandraisana lehibe amin'i Archipelago ilay Parrot mena-sofina: ny asa fiarovana izay nataon'ny Loro Parque Foundation hiarovana ilay karazana, izay nanampy tamin'ny fahombiazana tamin'ny laoniny.
Ny fandraisan'anjaran'ny Fondation amin'ny tetikasa hamonjy ny Parrot-mena-sofina, miaraka amin'ny ProAves Foundation of Colombia, dia zava-dehibe tamin'ny zava-bita fa ankehitriny dia nitombo ny isan'ny bibidia vorona ary nahatratra isa marobe. Ny tantara izay nanamarika ny fahaveloman'izy ireo dia nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1990, raha nanohana ny fiarovana ireo vorona 20 farany tao Ekoatera ny Loro Parque Foundation. Tamin'ny taona 1988 dia nanjavona izy ireo ary natahorana ho lany tamingana tanteraka ilay karazany; na izany aza, tamin'io taona io ihany ny tetik'asa Ognorhynchus dia natomboka tamin'ny tanjona mba hiantohana ny fahaveloman'ny karazan-javaboary sy ny onenany ao amin'ny Andes Kolombiana.
Taorian'ny fikarohana nandritra ny herintaona dia olona 81 no hita tao afovoan-Andes, tao amin'ny fiarahamonina Roncesvalles, raha ny volana Janoary 2001 kosa dia nisy olona 63 hafa niseho teny amin'ny tehezan'Andes andrefana tao Jardín, tao amin'ny Departemantan'ny Antioquia. Nandritra ny taona maro taorian'ny nanombohan'ny fiaraha-miasa dia ny Foundation no mpandrafitra voalohany ny tetik'asa izay mety ho lasa nahomby indrindra tany Amerika atsimo rehetra. Ary, raha ny marina, dia toy izany ny tahan'ny fanarenana izay tamin'ny taona 2010 ny Vondrona Iraisam-pirenena misahana ny fiarovana ny natiora (IUCN) dia nampihena ny sokajy fandrahonana Parrot-sofina mavo avy amin'ny «tandindomin-doza» ka lasa «tandindomin-doza».
Ity biby ity dia manana fifandraisana akaiky amin'ireo felatanana savoka, hazo nasionalin'i Kolombia, atahorana ihany koa ny fiompiana omby sy ny fampiasana tsy am-piheverana azy amin'ny fankalazana ny alahady Palm. Ny fikarohana nandritra ny taona maro momba ny fampiasana ny toeram-ponenana, ny sakafo, ny fizarana ary ny fitondran-tena dia niteraka fototra mafy orina amin'ny fandrahonana ny karazana sy ny felam-boninkazo, ka nahafahan'izany ny drafitr'asa miaro ny tontolo iainana.
Anisan'ireo fandraisana andraikitra samihafa napetraka ao anatin'ny rafitr'ity tetikasa ity izy ireo koa afaka nanantena ny fiaraha-miasa amin'ny Vatican. Na eo aza ny fototr'ity fomba amam-panao ara-pivavahana ity, ny fiaraha-miasa akaiky nataon'ny Fiangonana sy ny programa fanabeazana tsara dia nahafahan'ny tsirairay nampiasa safidy hafa ankehitriny.
Mampiofana mpiasan'ny hotely 500,000 XNUMX i Marriott hahafantarana ny famantarana ny fanondranana olona an-tsokosoko
sbe dia manambara tetik'asa hotely 10 any Mexico City
4 minitra lasa izay